3 Zvinhu Zvinhu Katsi Zvinogona Kutidzidzisa Nezvedu Buddhism - Mweya
3 Zvinhu Zvinhu Katsi Zvinogona Kutidzidzisa Nezvedu Buddhism
Makati, sevanhu, anogona kunge ari emururati uye asingatarisirwi. Katsi yega yega yakasarudzika. Ini ndakanga ndisingazive chero katsi dzakakura zvakanaka, asi ndakadzidzira kukoshesa kwadzo mune yangu yekupedzisira makumi maviri. Kunyangwe pasina katsi iri kuzoita nenzira imwecheteyo zuva rese kana vhiki rese, ini ndaona mashoma anonakidza uye anodzokororwa makati maitiro ayo ari mienzaniso yakanaka kwazvo yeBuddhist misimboti. Heano matatu chete.
vabereki vachidzora hupenyu hwangu pa25
Mufaro wekusaita ndeyekuti hapana chimwe chinhu chinofanirwa kuitika kuti ino nguva ive yakakwana.
- Buddhist Kufungisisa mudzidzisi uye Munyori Jon Kabat Zinn, mu Kwese Kwaunoenda, Ndiko Kwauri
Kana iwe wakamboona kati ichizorora zvechokwadi, iwe wakaona muenzaniso wakanaka kwazvo wekusaita. Makati anokwanisa kurega achifarira sweti yekapeti, mubhedha, uye / kana kupenya kwezuva nekusiya zvisina kujairika uko dzimwe nguva kwakaomera kuti vanhu vawane. Nguva zhinji ndanga ndichida kunzwa kuzorora kwekati inozorora. Ndinovatorera kusvika kwavo pamakumbo angu kuti vamborara semvumo yekutora nyore kwenguva.
Mubhuku rimwe chetero, Kabat Zinn anotora mazwi Thoreau :
kwaedza, zvino tarira, awa madekwana, uye hapana chinoyeukwa chaitwa.
Kurega kuita kushoma kuve kwakaringana kunogona kunge kuri kwehukama panguva dzekupfachukira midhiya uye kusagadzikana kumanikidza kukwikwidza uye kugadzira. Chirevo chekusaita ndechekuti chinogona kusanganisira kuita zvinhu nemazvo nekushandisa chete simba uye simba, uyezve, zviito zvinogona kuitwa nekutsetseka uye kutonhora kuri kugona uye kune chinangwa.
Sekureva kwaBuddha, unogona kutsvaga mune zvakasikwa zvese kune mumwe munhu anokodzera rudo rwako uye rudo kupfuura iwe, uye munhu iyeye haawanikwe chero kupi. Iwe iwe pachezvako, sekunge chero munhu mune zvese zvakasikwa, unofanirwa rudo rwako uye rudo.
- Buddhist Kufungisisa mudzidzisi uye Munyori Sharon Salzberg, mu Mutsa worudo
Iwe haufanire kudzidzisa katsi dzinozvida-rudo katsi dzinozvida ivo pakarepo uye zvizere. Kufanana nevana vevanhu, kana dziri katsi, dzinoda zvinonakidza uye zvinonzwa zvakanaka uye zvinozviteedzera nemoyo wese kusingaperi. Hunhu uhu, kune katsi dzakawanda, hunogara hupenyu hwavo hwese. Vanozvinanzva nekuzvishambidza, vanotambanudza zvine hunyanzvi, uye vanotaura zvavanoda kune vamwe, kazhinji zviri pachena.
anondida here kana kuti anoda bonde chete
Ivo havazivikanwe nekupa rudo rwenhema. Hunhu hunotorwa nekatsi painokumbira kana kukumbira kupihwa hanya uye rudo (asi kazhinji chete nenzira chaiyo yaanofarira) muenzaniso wakanaka kwazvo wekuziva nekubvunza zvaunoda. Kana katsi dziine mumwe munhu wavanovimba naye, ivo vakanakisa mienzaniso mukutambira rudo zvisina tsarukano. Kuzadzisa zvaunoda ndewe a musimboti wekuzvida .
Panogona kunge paine nguva, senge apo katsi iri kuda kubatwa nezwi guru kana kusundidzira imwe kati munzira yekudya, kuti iko kuzvida uku kunouyawo nedhigirii kuzvipa kodzero uye udyire, kana izvo izvo chiBuddha chinga funge kusungwa ne ego kana kubata. Asi isu tinogona kudzidza kubva pane izvi zvakare, uye tofungisisa kuti riini, muhupenyu hwedu pachedu, isu tingave takanyanya kufanana nekatsi inotsvaga kurapwa.
Ini ndinofunga vanhu vazhinji vakafarikanya hushamwari hune rudo nekitsi vanozobvuma kuti hadzisi mhuka dzese dzine udyire vazhinji vanozivikanwa nekuravira, kutevera, kurara pamusoro, kutamba navo, uye kushamwaridzana nevanhu zvine mutsa. Ndakaita rombo rakanaka rekugara nekatsi imwe inonzi Monster uyo aive mumwe weavo vakapfava uye vane runyararo mweya yandakasangana nayo.
Nzira Yekusvikira Nirvana Nokufamba Iyo Inokudzwa Eightfold Path
Ndini ani? Iyo Yakadzama Buddhist Mhinduro Kune Ino Yega Yemunhu Mibvunzo
4 Buddhist Kutenda Kuno Kunze Kunzwisisa Kwako Kunzwisisa Kwehupenyu Uye Kuite Kuti Ufare
8 Hunhu hweMunhu Akakura Pamweya
12 Zviratidzo Zvekuti Iwe Uri Kuchinjisa Kune Iyo Yakakwirira Chikamu Chekuziva
3. Kugara Makasununguka Munguva
Kuti uve zvauri - gara uri wega - pasina kunamatira kune yekare hunhu. Paunoti 'Hai! [Hongu!] ”Unokanganwa zvese pamusoro pako uye unozorodzwa mune mumwe munhu mutsva. Uye usati munhu mutsva ave munhu wekare, iwe unofanirwa kuti imwe '[Hongu!]' Kana iwe unofanirwa kufamba kuenda kukicheni.
- Zen Tenzi Shunryu Suzuki
Suzuki anorondedzera kuyerera kusingazungunuke kwehupenyu kubva nguva nenguva, uye kuraira kuti tinosheedzera 'Hongu!' apo isu, pachedu, tichiyerera tichipfuura. Katsi inokwanisa kuchinja nekukasira kubva pakuzorora ichienda pakutamba kana chiya chekutambisa minhenga chichihwina nenzeve dzayo. Katsi inoti hongu uye inotevedza toy, kunyangwe yanga isina kuronga kuzviita maminetsi mashoma apfuura. Katsi dzinopindura munguva iyo nenzira iyo inonzwa kurudyi kune yavo yazvino kana kadhibhodhi bhokisi rikaonekwa, vanogona kuriongorora, kurara mukati, kana kurirwisa, zvichienderana nehukasha hwavo.
Humwe hunhu huviri hwataurwa pamusoro apa: kugona kwekatsi kudzidzira kusingaite uye kuzvida, ndihwo humwe humbowo hwehunhu hwechitatu, kurarama munguva . Kurega kuenda mukusaita uye kuzvitambira kunotora nzira refu yekurarama wakasununguka uye kuvapo. Kunyangwe katsi dzinogara nesu dzave kunyanya kudzidziswa, ivo vanochengeta iyo grounding kuvapo mumitumbi yavo (mavanogona kusangana nenguva yacho) iyo hunhu hwemhando dzemhuka dzinoramba dzakabatana nemasikirwo.
Paunoona Sandpiper pamhenderekedzo yegungwa ichisvetuka pamwe nejecha nemabvi ayo ekumashure, kana shumba ichizorora muhuswa nemhuri yayo pachirongwa chechisikigo, unogona kuona kugara kwavo mumiviri yavo uye nenguva yavanogara. Makati, kunyange akajairidzwa netsika dzevanhu, achiri nekwaniso yekuva echisikigo atinogona kudzidza kubva. Vanoti hongu kune kwavari nekugara mumiviri yavo uye kupindura intuititive kune zvakapoteredza .
Wendell Berry akanyora mukati Runyararo rweZvisikwa Zvinhu,
mukadzi wangu haadi kushanda
Ini ndinopinda murunyararo rwezvinhu zvemusango izvo zvisingabhadharise hupenyu hwavo nekufungisisa kwekusuwa.
Kugara mune iripo, tichisiya isu pachedu, tichizvida isu, tisingadaro - iri chirevo chakareba kuita. Ehe, katsi, sevanhu, dzinogona kunge dzichiratidzika, zvine hukasha, uye dzinovhiringidza, uye hadziwanzo dziine zvimiro zveBuddha. Iyo poindi ndeye, zvakapusa, kuti katsi ndidzo pachadzo. Vanorarama hupenyu hwavo pamba mumiviri yavo.
Vanhu vazhinji vakave kure kure nemiviri yavo, iyo yazvino nguva, uye zvakasikwa zvakasikwa, uye vachinetseka kuti vawanezve hukuru pfungwa yekurega, kuva, uye kusangana. Kurara, kuzvichengeta, uye kutamba sekatsi kungava kutanga kwakanaka.
murume wangu akandisiira mumwe mukadzi and i want him back
unoziva sei kana iwe uri wakanaka
handizive zvekuita izvozvi
arikundirasa kufarira ini
kana mukomana achingoda kurara newe
zvinorevei miganhu muhukama